ISTICMAALKA DAROOGADA "TRISULFON" IYO "EYMETERM" EE DIGAAGGA: TILMAAMAHA ISTICMAALKA - BEERAHA DIGAAGA
Cudurada bacrimiya xayawaanka ayaa xayiraad badan ku siiya beeraleyda digaaga. Dabcan, beeralaydu waxay raadinayaan daawooyinka ugu waxtar badan ee cudurrada faafa. Qodobkan, waxaan tixgelineynaa daawooyinka "Trisulfon" iyo "Eymeterm", ficilkooda iyo codsigooda.
"Trisulfon" waa wakiilka antimicrobial ee arjiga ballaaran, waxaa lagu tilmaamaa daaweynta xayawaanka beeraha, oo ay ku jiraan nooc kasta oo digaag ah.
Noocyada iyo hantida daawooyinka
Soosaarka daroogada ee Slovenian ah ayaa la heli karaa qaabka budada iyo ganaaxa. Maaddooyinka firfircoon - sulfamonometoksin iyo trimethoprim. Daawooyinka Tundem waa firfircoon ka soo horjeeda sheyga-diidmaadka iyo naxwada leh.
Ma taqaanaa? Inkastoo ay aaminsan yihiin caan, digaagga ayaa dabaasha. Digaagga way daadi karaan haddii ay ku jiraan biyaha muddo dheer, laga soo bilaabo hypothermia iyo darnaanta baaluqa qoyan ee u jiidaya hoosta, ama sababtoo ah argagax.
Waxay joojisaa suurtogalka ah folic acid ee unugyada bakteeriyada, taasoo keentay in carqaladeeyo qalabka nucleic, borotiinada; unugyada bakteeriyada ayaa lumiya kartidooda awooddooda kala qaybinta iyo dhimashada.
Daawada waxaa loo qoraa cudurada shimbiraha soo socda:
Powder iyo suspension waxay ku siinayaan shimbirta iyadoo ay weheliso biyo la cabbo:
dadka waaweyn ee loogu talagalay shakhsiyaadka leh coccidiosis, qiyaasta qiyaasta qiyaasta 200 ml / g ee badeecada ah halkii 100 l oo biyo ah, oo ku jirta cabbitaanka khamriga oo keliya walxahaas oo dhan ee idaha, habka daaweynta waa ilaa shan cisho;
shimbiraha kale ee qaba infakshannada kale, qiyaasta waxaa lagu xisaabiyaa miisaanka guud ee dadweynaha - 32 kiiloogar per millilitre / walxaha walxaha cabitaanka cabitaanka maalin kasta, muddada daaweynta waxaa soo qoraya xoolaha, iyada oo ku xidhan xanuunka;
dhalinyarada qiyaasta qiyaastii waa kala badh;
digaagga illaa toban cisho labadaba, qiyaasta daawada waa saddex laab.
Wax saameyn ah oo aan la ogaan intii lagu jiray isticmaalka, falcelinta xasaasiyadeed waa suurtogal u ah dulqaad la'aanta qaybaha.
Waa muhiim! Cudurka infakshanka waa jiirka iyo shimbiraha duurjoogta ah: waa in ilaalinta loo fidiyaa qaybahooda ka hor intaan la gelin hoyga iyo hoyga socodka.
Daroogada ayaa ka horjeeda digaagga - waxay si xun u saameeyaan tayada ukunta.
Dilida hilibka digaaga ee hilibka ayaa loo oggol yahay toban maalmood kaddib marka daaweyntu dhammaato, iyada oo guurka hore loo gooyey hilibku u adeegi karo cunnooyin xayawaanka dhogorta leh.
Baro sida loo dilo digaagga, tiknoolajiyada gawaarida iyo processing ee digaagga, miskaha, Peking iyo duckfish, Goose.
Isku-darka daaweynta suuxinta deegaanka, oo leh fitamiinada kooxda B laguma talinayo.
Markaad la shaqaynayso daawo, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo tallaabooyinka ammaanka, ilaalinta wajiga iyo indhaha, iyo maqaarka gacmaha. Haddii ay dhacdo in shilal la xiriiraan xuubka xabka, waxaa lagama maarmaan ah in isla markiiba ku tirtirto biyo nadiif ah oo tiro badan, kadibna waxaa lagugula talinayaa inaad la tashato takhtar.
"Eymeterm" - daroogada caafimaadka xoolaha ah, oo ah xalka daaweynta afka.
Walxaha firfircoon ee xalka 2.5% waa toltrazuril. Walaxda ayaa carqaladeeysa geeddi-socodka hordhaca ah ee maadooyinka, kala-qaybinta nuklei ee unugyadooda, habka neefsiga ee dulin, taas oo keeneysa dhimashadooda.
Ma taqaanaa? BSaacad-dabiiciga ah ee cirridku kama soo baxo xitaa kali-ahaansho buuxda ama maqal la'aan. Isagoo marwalba soo dhaweynaya, waxaa had iyo goor la maqlaa waqtiga saxda ah. Natiijooyinka noocaan ah waxaa lagu gaadhay koorsooyinka tijaabada ah ee ay sameeyeen dhakhaatiirta Japan, natiijooyinka cilmi-baarista waxaa lagu daabacay qoraallada sayniska ee cilmi-baarista.
Qaybaha caawinta ee daroogada - triethanolamine, glycol polyetylen.
Daroogo ficil ah ayaa loo adeegsadaa daaweynta iyo kahortaga coccidiosis.
Baro wax badan oo ku saabsan sida loo daaweeyo coccidiosis ee digaagga, sida iyo waxa loo daaweeyo coccidiosis ee digaagga iyo digaagga.
Xalka ayaa la quudinayaa shimbirta, qiyaasta 7 mg ee daawada halkii kiilo ee miisaanka nool. Inta lagu jiro daaweynta, cabitaanka xoolaha gaar ahaan biyaha "Eymeterm". Muddada daaweynta waa laba cisho, daawadu waxay sakhraansan tahay laba siyaabood:
1 ml halkii 1 litir oo biyo ah laba maalmood;
3 ml halkii litir oo biyo ah siddeed saacadood maalintii, laba maalmood.
Haddii ay lagama maarmaan tahay, ku soo celi kooraska ka dib shan maalmood.
Waa muhiim! Muhiim ma aha in la diyaariyo xal horudhac ah: ficilkeedu wuxuu soconayaa 48 saacadood.
Haddii ay dhacdo xaddi badan, digaagga waxay diidaan cunto iyo biyo, iyadoo fiirineysa qiyaasaha falcelinta xun aan la ogaan.
Layers of the mens dooratay daroogooyinka daran ee dagaalka, sababtoo ah "Eymeterm" ku uruuray ukunta.
Xalka waxaa lagu dari karaa cuntada iyo fitamiinada dheeraadka ah. Gawaarida cunnooyinka hilibka ayaa loo oggol yahay laba toddobaad kaddib marka daaweyntu dhammaato.
Gebogebada, waa muhiim in la xuso: Ha isticmaalin mukhaadaraadka, cudurada faafa ee badanaa waxay leeyihiin calaamado la mid ah, daaweyn aan habooneyn iyo dib u dhac waxay horseedi kartaa geerida dhammaan guryaha digaaga.